Ho tambatambazana indray ve ny solombavambahoaka ? · déliremadagascar
Ho tambatambazana indray ve ny solombavambahoaka ?
Edito	 28 juin 2017 R Nirina
Efa ho avy ny fifidianana ho filoham-pirenena. Misy amin’ireo mpanao politika mangataka ny hanovana io lalam-panorenana io alohan’izany. Ny fitondrana ankehitriny koa mety manana fanirina hanova na hikitika ny andininy maromaro amin’io lalam-panorenan’ny repoblika faha efatra lany tamin’ny tetezamita notarihan’i filoha Andry RAJOELINA. Azony atao tsara izany amin’ny fampiasana ireo olom-boafidy. Ny fanomezana fiara tsy mataho-dalana 4X4 izay efa nodradradrain’izy ireo ny tokony hanomezan’ny fanjakana izany. Ny sasany amin’ireo solombavambahoaka ireo dia sahy milaza mihitsy fa zon’izany. Efa fitaona ihany koa izao hanaovan’ny fanjakana io pimaso io alohan’ny hiafaran’ny fotoam-pivorian’izy ireo raha manam-paniriana izany fanovana lalam-panorenana izany ny mpitondra ankehitriny izay tarihin’ny filoha Hery RAJAONARIMAMPIANINA. Raha tian’io fitondrana io ny hanamafy ny fitondrany, ny fanovana lalam-panorenana ihany no vahaolana voalohany satria sahirana tanteraka teo amin’ny fanendrena ny praiminisitra ohatra.
Ity ny andininy afahan’ny filohan’ny repoblika manao izany fanitsiana izany :
Article 162. – L’initiative de la révision, en cas de nécessité jugée impérieuse, appartient soit au Président de laRépublique qui statue en Conseil des Ministres, soit aux Assemblées parlementaires statuant par un vote séparé à la majorité des deux tiers des membres.
Ireto ny andiny mety ho kitihiny sy hovainy :
Io andiny io anisany nanahirana ny fitonadran’ny filoha mihitsy ka azo antoka fa tsy maintsy hovany.
Ity andiny ity koa mety ho asian’ny fanitsina, roa no mety antony hanovany izany. Voalohany, mety manelingelina azy ny filohan’ny tetezamita teo aloha Andry RAJOELINA . Faharoa, ny fialana enim-bolana mialoha ka hanome ny fahefana ny filohan’ny Antenimerandoholona Honoré RAKOTOMANANA.
Article 46.- Tout candidat aux fonctions de Président de la République doit être de nationalité malagasy, jouir de ses droits civils et politiques, avoir au moins trente cinq ans à la date de clôture du dépôt des candidatures, résider sur le territoire de la République de Madagascar depuis au moins six mois avant le jour de la date limite fixée pour le dépôt des candidatures.
Le Président de la République en exercice qui se porte candidat aux élections Présidentielles démissionne de son poste soixante jours avant la date du scrutin Présidentiel. Dans ce cas, le Président du Sénat exerce les attributions Présidentielles courantes jusqu’à l’investiture du nouveau Président. Dans le cas où le Président du Sénat lui-même se porte candidat, les fonctions de Chef de l’Etat sont exercées par le Gouvernement, collégialement.
Ny dikan’izay rehetra izay raha tanteraka, tsy hisy ny fifidianana ho filoham-pirenena ny taona 2018 fa ny fitsampan-kevim-bahoka no atao. Noho izany, hisy karazana tetezamita indray hitaran’ny fitondrana ankehitriny ka mety amin’ny taona 2020 vao ho tanteraka ny fifidianana ho filoham-pirenena.
Hiaona any amin’ny filoha Macron any Frantsa anio ny filoha Malagasy.
Hihaona amin’ny filoha Frantsay any Parisy anio tolakandro ny filoha Malagasy. Nilaza izy fa ho fanamafisana ny fiaraha-miasa eo amin’ny firenena roa tonta ny anton’ny fihaonana. Nahoana no tsy nasaina ho tonga teto tamin’ny fetin’ny fankalazana ny niverenan’ny fahaleovan-tenan’i Madagasikara izy e ? sa tsy maintsy mandeha any hangataka ? raha fangatahana hiverenan’ireo nosy kely « iles éparses » moa ka aninona fa sao indray hisolelaka hitrosa sy hangataka vola any indray. Efa nilaza ny filoha Malagasy fa mahantra ka tokony ho taperina . Enga anie ny resaka hifanaovan’ izy ireo mba ho tombotson’ny vahoaka Malagasy. Andrasana ny vakatry izany fihaonana izany anio.